Kordhin si loo dhigo Gnome Shell Dock dhinaca midig | Laga soo bilaabo Linux
Isticmaalayaasha Qolofta Gnome way ogyihiin inay u helaan Dock ay ku jiraan codsiyadayada aan jecel nahay, waa lagama maarmaan in la helo Guudmarka riixaya fure Super L (midka leh astaamaha daaqadaha) ama adigoo tilmaamaya tilmaamaha geeska bidix ee kore (Geeska Kulul).
Hagaag, waxaan kuu keenayaa kordhin taas oo noo oggolaan doonta inaan ku xirno dhinaca midig ee shaashadda iyadoon loo baahnayn in la galo Guudmarka, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu habboon in la helo barnaamijyada aan jecel nahay.
Waxaan fureynaa terminal waxaanan qoreynaa waxyaabaha soo socda:
Mar dambe ayaan dib u bilaabi doonnaa Gnome-Shell. Waxaan riixeynaa isku dhafka Alt + F2, ayaan qornay "R" iyada oo aan xigashooyinka aan bixinno gal. Waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan kordhino kordhinta Qalabka Gnome-Tweak-Tool. Sidan oo kale, tab yar oo madow ayaa ka soo muuqan doona dhinaca midig ee shaashadda, oo markii la dul dhigo, ka saara dekedda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Kordhin si loo dhigo Gnome Shell Dock midigta
Ma jirtaa wax la dhigto sida hawsha baar?
Taas ayaa ka wanaagsan Docky / AWN? Waxaan dhihi karaa ... iyo barta shaqada guud waxaa jira kordhinta kooxda Mint ...
Kordhintaasi wax badan ayey soo hagaagtay tan iyo noockeedii ugu horreeyay, hadda waxay leedahay dhibaatooyin qaar oo aan rajeynayo inaad ku xallin doonto noocaaga soo socda.
Ku jawaab lordix
maqaal aad u wanaagsan, waxaan rakibayaa kordhintaan, waxaan u arkaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan.
Waxaan kaloo kugu martiqaadayaa inaad soo booqato: